Christine Marzano – Cast – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Death Race 4: Beyond Anarchy (2018) Unicode Dead Race ဆိုတဲ့ Movie ကို အများကြီးညွှန်းစရာမလိုတော့ပါဘူး…Dead Race ပြိုင်ပွဲမှာထောင်ထဲမှာပြုလုပ်တဲ့ တရားဝင်ပြိုင်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့အဲပြိုင်ပွဲမှာဝင်ပြိုင်တဲ့အကျဉ်းသားတွေအကုန်လုံးကလည်းထောင်ဒဏ်တသက်တကျွန်းကျထားပြီးတဲ့သေမထူးနေ့မထူး အရက်စက်ဆုံး လူမဆန်ဆုံးနဲ့ လူသတ်သမားတွေရာဇဝတ်သားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်…. ဒီလိုအကျဉ်းသားတွေကို သူတို့လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်အခွင့်ရေးတစ်ခုရောက်လာပါတယ်…အဲဒါကတော့ ထောင်ထဲမှာကားပြိုင်ရင်းနဲ့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်သတ်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်…ဒီလိုပြိုင်ရင်းကနေ ပြိုင်ပွဲတိုင်းရဲ့ ဘုရင်တစ်ပါးပေါ်လာပါတယ်…သူကတော့ Frankenstein ပဲဖြစ်ပါတယ်…အခုတင်ဆက်ပေးမယ့် Dead Race4မှာကတော့ နိုင်ပွဲတွေဆက်လာနေတဲ့ Frank ကိုအစိုးရကနေ ထောင်ထဲမှာပဲ ကားပြိုင်ရင် သုတ်သင်ရှင်းလင်းဖို့အတွက်လုပ်မယ့်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်……ဒါကြောင့် နိုင်ပွဲတွေဆက်နေတဲ့ ပြိုင်ပွဲတိုင်းရဲ့ဘုရင် Frank ကိုရှင်းနိုင်မလားဆိုတာ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်… ဒီ Dead Race ဆိုတဲ့ Movie အမျိုးစားဟာ ထောင်ထဲမှာစရိုက်ဆန်ဆန်နဲ့ရိုက်ထားတဲ့Action Movie အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးအရွယ်မရောက်သေးသူများနဲ့မိသားစုနဲ့ကြည့်ရှု့ဖို့မသင့်တဲ့အခန်းအတော်များများပါဝင်ပါတယ်…..လူသတ်ကားဖြစ်ပြီးတော့ သွေးထွက်သံယိုတွေရက်ရက်စက်စက်သတ်ဖြတ်တဲ့အခန်းတွေလည်းအများဆုံးပါဝင်ပါတယ်….ကြမ်းကြမ်းမှကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပရိတ်သတ်တွေအတွက်အကြိုက်တွေ့စေမယ့်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်… Credit Review ဒီဇာတ်ကားကိုဘာသာပေးသူကတော့ Wutyi May ဖြစ်ပါတယ် Zawgyi Dead Race ဆိုတဲ့ Movie ကို အမ်ားႀကီးၫႊန္းစရာမလိုေတာ့ပါဘူး…Dead Race ၿပိဳင္ပြဲမွာေထာင္ထဲမွာျပဳလုပ္တဲ့ တရားဝင္ၿပိဳင္ပြဲျဖစ္ၿပီးေတာ့အဲၿပိဳင္ပြဲမွာဝင္ၿပိဳင္တဲ့အက်ဥ္းသားေတြအကုန္လုံးကလည္းေထာင္ဒဏ္တသက္တကြၽန္းက်ထားၿပီးတဲ့ေသမထူးေန႔မထူး အရက္စက္ဆုံး လူမဆန္ဆုံးနဲ႔ လူသတ္သမားေတြရာဇဝတ္သားေတြပဲျဖစ္ပါတယ္…. ဒီလိုအက်ဥ္းသားေတြကို သူတို႔လြတ္ေျမာက္ဖို႔အတြက္အခြင့္ေရးတစ္ခုေရာက္လာပါတယ္…အဲဒါကေတာ့ ေထာင္ထဲမွာကားၿပိဳင္ရင္းနဲ႔တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္သတ္ရတာပဲျဖစ္ပါတယ္…ဒီလိုၿပိဳင္ရင္းကေန ၿပိဳင္ပြဲတိုင္းရဲ႕ ...
IMDB: 5.2/10 3288 votes